Tag: faallo | Martech Zone
Waxaan u dhex marnay nidaamka faallooyinka dhowr jeer Martech Zone. Nasiib wanaag, dhammaan aaladaha muhiimka ahi way iswaafajin doonaan faallooyinka (ma isticmaaleyno haddii aysan isticmaalin). Faallooyinka ayaa noqonaya mowduuc maalmahan maadaama faallooyinka faallooyinka ay faafayaan isla markaana inbadan oo ka mid ah wada hadalka midabada badan leh ay ka dhacayaan khadka tooska ah, taas oo horseedeysa qaar ka mid ah baloogyo aad u waaweyn oo damiya gabi ahaanba faallooyinka. Waxaan la joogaa saaxiibkay Lorraine Ball midkaan oo dhahaya: Aniga ahaan, baloog bilaa faallooyin ah ayaa la mid ah
Faallooyinka Ku Haya Soo-booqdeyaasha Akhrinta Blog-kaaga
Talaado, Febraayo 6, 2007 Sabtida, Oktoobar 25, 2014 Douglas Karr
Waxay gujiyeen boggaaga… waxay akhriyeen gelitaanka baloogga ee ay u yimaadeen. Ma jiraan wax kale oo runtii xiisaynaya iyaga. Waad ogtahay inaad heshay qoraallo badan oo xiiso leh oo aqriste kasta uu xiiseyn karo, laakiin sidee ugu muujin kartaa aqristayaashaada cusub ee 'kaliya iska maraya'? Maanta waxaan helay xoogaa taraafiko ah. Waxaan ahay Mac, waxaan ahay PC-ga soo galay bogga hore ee Netscape oo aan ka gudbay a